Posted by မေဓာဝီ at 10:52 PM
ငယ်ငယ်က ကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတကား နာမည် သွားသတိရတယ် ...
"ဖြေနိုင်ပေါင်" တဲ့ .... ဟီဟိ :D
ကျနော်လည်း နှစ်ခါလောက် တန့် ဖူးတယ်ဗျ။ ၆ တန်းမှာ တခါ။ မာစတာတန်းမှာ တဘာသာ။ စာမေးပွဲက အခုနောက်ပိုင်း မဖြေရတော့ပေမယ့် စာမေးပွဲဖြေတဲ့ အိပ်မက်တွေကတော့ နှိပ်စက်တုန်းဗျိုး။ ဖြေရမယ့် ဘာသာမှားပြီး ကြည့်သွားမိတဲ့ အိပ်မက်က အဆိုးဆုံးပဲ။
6/16/2010 12:53 AM
မမေ စာမေးပွဲပြီး ၃လနားတော့ စာတွေဖတ်ရတော့မည်း)))
မလေးလည်း အဲဒီမြောက်ကိုရီးယားနံပါတ်ကိုးက အရမ်းကြီးငိုနေတော့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ဘူး...။ ကိုယ်တိုင်ပါ ၀င်ငိုပေးရမယ့်ပုံဖြစ်နေတယ်သူ့ဟာက။ နဂိုကတည်းက (ဘရာဇီးကလွဲပြီး) underdog တွေကို အားပေးလာခဲ့တာဆိုတော့ ဒီပွဲမှာတော့ မြောက်ကိုရီးယားကိုပဲ အားပေးလိုက်တော့တယ်..
Elano ဂိုးသွင်းတုန်းကလည်း သူလည်း ငိုမလိုကိုဝမ်းသာနေသေးတယ်.. ဟင်းးး..
6/16/2010 1:37 AM
စာဖတ်သွားတယ်ဗျာ မေးနဲ့ဆိုလို့ မမေးတော့ပါဘူးနော် တရားဖြောင့်ဖြောင့်ထိုင်ခဲ့နှော
နှိပ်စက်ခန်းထဲ မရောက်ဘူးတာတောင် တော်တော်ကြာနေပြီ....
6/16/2010 1:47 AM
၃နာရီဆိုတဲ့အချိန်မှာ အဆုံးအဖြတ်ပေးတာတော့ သိပ်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့...
သာမီးက ၁နှစ်လုံး အပတ်တကုန် ဘလော့တွေဖတ်..အဲ..စာတွေဖတ်ထားပေမဲ့ ဒီအချိန်လေး ၃နာရီမှာ သာမီးက သိပ်မဖြေနိုင်တာဟုတ်ဘူး။ မေးခွန်းထုတ်သူတွေက မဟုတ်တာ။
6/16/2010 1:49 AM
သူလဲ စာမေးပွဲဖြေတဲ့သူကို သတင်းကြားနားနဲ့ဝမ်းနဲပက်လက်ဖြစ်သွားထင်ပါရဲ့....
6/16/2010 2:23 AM
စာမေးပွဲမှာ အရောင်ပျံတွေနဲ့ အောင်ပါစေ။
6/16/2010 2:43 AM
အခုလို သက်သေ သက္ကာယတွေနဲ့ အတူ ပြထားတော့ မေ ဘယ်လောက် စာကြိုးစားတယ် ဆိုတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် မြင်ရပါပြီလေ...
အမှတ်တွေ အများကြီးနဲ့ အောင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းတယ်နော်... ကျောင်း ၃ လ အပိတ်မှာ စာတွေလဲ အများကြီး ရေးပါအုံး...း))
6/16/2010 3:49 AM
အစားတွေ ခြံရံထား လို့..
ACCA? What paper you sit for? I took P2(yesterday) . I didn't do well in exam although I worked hard on this paper :(.
နောင်ကောင်းကြောင်းဆို နုပျိုတုန်းနှိပ်စက်ထားမှ ကြိုးစားပစ်လိုက်ပါ အားနွဲ့တဲ့အတွေးနဲ့လေသံ လက်မခံ ဒဏ်ပေးမယ်ဆိုတောင် ဒဏ်ပဲလက်ခံလိုက်ပါ။
စာအုပ်တွေ ကြည့်ပြီး အတော် သနားသွားပါတယ်..မတန့်စေဘို့ဆုတောင်းပါတယ်..
ရွှေစင်ဦး ကတော့ ဒီဘဝမှာ စာမေးပွဲတွေနဲ့ ဝေးရတဲ့ အတွက် အပျော်ဆုံးဘဲ..
စာတွေလည်း အများကြီးတင်ထားပါတယ် .. စိတ်အပန်းဖြေ ဖတ်လှည့်ပါနော်..
မမေဓါ ပြောတဲ့ စာအုပ် တွေ လောလော ဆယ်ဆယ် ရွှေစင်ဦး မှာ မရှိသေးပါဘူး ရှာလို့ရရင် ရှာပြီး တင်ပေးပါမယ်နော်..
အခု ကျနော် တို့ ရွှေပြည် မှာ ဟိုကပိတ် ဒီကဆို့နဲ့ မနဲတင်နေရတယ် ဟိုရက်ပိုင်းက တင်နေကျ ပရောက်စီတွေ ဘမ်းသွားလို့ မနဲ ကျော်ဝင်ရတာ ညတိုင်း မိုးချုတ်မှ တင်ရတယ် အခု နောက်ဆုံးရတဲ့ ပရောက်စီလေး နဲ့ မနေ့ကထိ အဆင်ပြေသေးတယ် ဒီနေ့ မရတော့ပြန်ဘူး
အခု ခြံစည်းရိုးပျက်ကနေ ကျော်ဝင်ထားတာပါ.. ဖတ်လို့ဘဲရတယ် ပိုစ် တင်ချင်ရင် မိုးချုပ်လိုင်းကောင်းမှ ရပါတယ်
မမေဓါဝီ ရေ ကျနော် လည်း ဝါသနာ ပါလွန်းလို့သာ ကျိုးစားလုပ်နေတာ တခါတခါ စိတ်တော်တော်ပျက် ပျက်သွားတယ်
ညီမ စည်းစိမ် ကလည်း ညီမ စာမေးပွဲ ဖြေနေကထဲက ခဏခဏ ပြောနေတာ သတိရလို့တဲ့ ... ခင်ကြတာကိုးနော်
6/16/2010 5:35 AM
စာမေးပွဲက ၆ လ တခါ ပြန်ဖြေလို့ရတာပဲ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားက ၄ နှစ်မှ တခါကန်တာ ..
အဲဒီလို တွေးပြီး ဘောလုံးပွဲကြည့်တဲ့ ကျောင်းသားတွေ တကယ်ရှိတယ်.. မေဓါဝီက တွေးရုံပဲ တွေးတော့ တော်တာပေါ့.. :)
6/16/2010 6:04 AM
Btw, I likeanews paper that say "USA win 1-1"
စာကျက်ရတာ များလို့ စာကြည့်စားပွဲပေါ်က မျက်မှန်
လည်း ပါဝါတွေ တက်အုံးမယ် မမေဓါဝီ၊ ကမ္ဘာ့ဖလား
တက်ဂ်ကို ရေးပေးဖို့ အချိန်မှီပါသေးတယ်၊ မျက်ရည်
ကျတာကို သနားတတ်ရင် အမှုသည်ဆီက အမှုအပ်ခ ရသင့်သလောက် ရပါ့မလား ...း)
ဖြေနိုင်လားမမေးတော့ပါဘူး။ အောင်တော့ အောင်လောက်တယ်မဟုတ်လား။ တံ့ဖူးနေမှ နောက်တခါလောက် အမှတ်တရ ထပ်တံ့လိုက်လို့ မထူးပါဘူး...........လို့ မပြောဘူးမှတ်ပါ။
6/16/2010 2:27 PM
အောင်စာရင်းထွက်တော့ "at the top of the ထိပ် " ကနေ အောင်မှာပါလေ..။
စာဖတ်ရင်း ဂဏန်းပေါင်းစက်တွေနဲ့ ကဏန်းတွေ ပေါင်းစားနေတာကိုး...
မမမေ စာမေးပွဲကို အမှတ်ကောင်းကောင်းနဲ့ အောင်ပါစေနော်...
ဒါနဲ့မြောက်ကိုရီးယားက နံပါတ် ၉ လူက ဘာလို့ငိုတာလဲ.... အရင်ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲတွေတုန်းက မြောက်ကိုရီးယားက မပါသေးဘူလားဟင်... တကယ်စိတ်ဝင်စားမိပြီး သိချင်လို့ပါမမ ဘောလုံးနဲ့ ပက်သက်ရင် ဘာမှကို မသိဘူး..
6/17/2010 3:06 AM
ယုံပါတယ်.. အောင်မှာကို.. ကျနော်သူငယ်ချင်းကတော့ စာမေးပွဲဖြေပြီးတဲ့ နေကစပြီး စာစစ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို နေ့တိုင်း မပျက်မကွက် မေတ္တာပို့တယ်ဗျို .. ဂေဇတ်ထွက်ပြီး အောင်မှ မေတ္တာပို့ ရပ်သွားတော့တယ်.. (သူ့မေတ္တာပို့ကလဲ တစ်မျိုးပဲ) ဒါပေမဲ့..အောင်သွားတယ်။ ဆိုတော့ .. မမေလဲ မေတ္တာများများပို့ပါ..လို့ ..တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မေတ္တာဘာဝနာလဲ ပွါးများဖြစ်တာပေါ့။
ကျိုးစားတဲ့ လူတိုင်း အောင်မြင်ကြပါတယ်.. မမေကိုတော့ ကျနော် ခုကထဲက မေတ္တာပို့ပေးပါတယ် .. ရွှေမန်းတင်မောင်ရဲ့ သီချင်းလေးနဲ့... အောင်ပါစေ..လို့...(မောင်ကြီး)
6/17/2010 3:32 AM
6/17/2010 1:29 PM
မေရေ... တို့ ညီမက တော်ပြီးသားမို့ အောင်မှာပါ...အောင်မှာသိပြီးသားမို့ ဖြေနိုင်လားလို့ မမေးတော့ဘူး... စာကြည့်စားပွဲပုံလေးကြည့်ပြီး ပြုံးမိသွားတယ်... အမလဲ အဲလိုပဲ...ဦးနှောက်များများသုံးရပြီဆို ဗိုက်တွေဆာလာတတ်တာ... ကျောင်းတုန်းက သူများတွေက စာမေးပွဲနားနီးရင် ပိန်ကြတယ်...အမကတော့ မပိန်ဘူး...စားကောင်းသောက်ကောင်းလေ...ဒါပေမယ့် တကယ်ဖြေမယ့်နေ့ ကျတော့ ရေတောင်မသောက်နိုင်တော့ဘူး...ဟီး... မေ့စာမေးပွဲခန်းကြီးက ကြောက်စရာကြီး... ဦးရီးတော်အိမ်တော့ မေ့ အေဘီစီ ရွတ်သံတွေနဲ့ စိုပြေဦးမှာပေါ့...
6/17/2010 1:43 PM
ဘောလုံးပွဲကိုက်နေတာနဲ့ ကွန်မန့်တွေ ချက်ချင်း မပြန်နိုင်ဘူး။ :P
ညီမလေး ပူးတေ မြောက်ကိုရီးယားကစားသမား ငိုတာက သူတို့ ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲမှာ ၀င်ကန်ခွင့်ရတာကို ၀မ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်လို့ ထင်တာပဲ။ သူတို့လဲ ခြေစစ်ပွဲအောင်လို့ ၀င်ကန်နိုင်တာလေ။ ၁၉၆၆ တုန်းက အုပ်စုပွဲမှာ အီတလီကို နိုင်ပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်ထိ ရောက်တယ်ပြောတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းတော့ မသိဘူးညီမရဲ့။
စာမေးပွဲအတွက် ဆုတောင်းပေးသူ ကွန်မန့်ရေးသူ မရေးဘဲ စာလာဖတ်သူ အားလုံးအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ ဘောလုံးပွဲဆက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်။ :D
တရေးနိုးသော် အကြံပေါ်.. ပေါ်တဲ့အကြံ ပြန်ကြည့်ရန်ပေါ့... (ဘော့ပွဲ)
6/18/2010 3:06 AM
ခင်မင်ပျော်ရွှင်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဘလော့ခ်လေးနဲ့ ဘလော့ခ်ကာလေးပါပဲ မေဓါဝီရေ.. ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ဖူးပေမယ့် စာတွေ ဖတ်လိုက်မိတာနဲ့ တန်းပြီး ခင်မင်သွားမိတယ်... (လင့်ခ်ယူသွားတယ်ဗျာ... )
6/20/2010 4:06 AM
အော်... အနှိပ်ခန်းတွေများတဲ့ နိုင်ငံကနေ နှိပ်စက်ခန်း ရှိတဲ့နိုင်ငံကို ရောက်နေတော့လဲ...
လင်ခ်ပြောင်းချိတ်ထားလို့ မနက်ဖြန်လောက်တော့ ပြန်ရမယ်ထင်တယ် စိတ်ပူနေမှာဆိုးလို့ ပြီးတော့ အကြာကြီးပျောက်နေတယ်နော်
ဂရိတ် ၄.၅ လောက်အနည်းဆုံးရနိုင်တယ်...
အနော့်ထက်အပြန်တစ်ရာလောက်စာကြိုးစားတယ်။ ရှယ် ဂ၇ိတ်နဲ့ကိုအောင်မှာသေချာတယ်ဗျား/
ဟဲဟဲ...စာကြည့်စားပွဲမှာအစားအသောက်တွေပုံနေတာတော့ အနော်နဲ့တူတူပဲ။ အနော်လဲအဲလိုပဲ။။အစားတွေအကုန်စားလို့ကုန်မှ..စာကိုအသစ်ကျက်ဖြစ်တာ နို့မို့ဆို Module အသစ်မတက်ဖြစ်ဘူး။
စာမေးပွဲဝေးတုန်းကတော့အင်တာနက်သရဲလုပ်နေပြီး နီးတော့မှ ဘယ်နှစ်ရက်အပြတ်ဘာညာကျက်ပြီး...
အထက်ကမောင်ကြီးပြောသလို အဆန်းမေတ္တာပို့နည်းနဲ့ဆ၇ာတွေကိုမေတ္တာပို့တာ..အဟဲ.....ခုတော့ရပ်သွားပြီ :D :)